महिलाहरु घरबाहिर निस्केपछि समाज अचानक हडबडाएको छ
नारीवाद के हो? नारीवादी कसलाई भन्ने?
महिलालाई पूर्ण मानवको मान्यता दिइनुपर्छ, महिला भएर जन्मेकै आधारमा उसलाई उसका मानवोचित अधिकारबाट वन्चित राखिनु गलत हो भनेर चरणबद्ध रुपमा विभिन्न अधिकारको वकालत गर्ने विश्वव्यापी अभियान नारीवाद हो। संसारमा अधिकारका लागि भएका हजारौं आन्दोलनमध्येको यो मात्रै त्यस्तो आन्दोलन हो, जो बिना हातहतियार र बिना रक्तपात निरन्तर संसारभरि जारी छ। नारीवादले पुरुष र महिला दुवैलाई समान मानव ठान्छ। जसअनुसार न पुरुष बढी मानव हुन्, न महिला कम मानव। बरु आफूलाई बढी मानव मानिँदा, पितृसत्ताका कारण ‘सुपरह्युमन’ बन्नुपर्दा पुरुषको पनि शोषण भएको छ। त्यसैले महिलाको अवस्था समृद्ध हँुदा उनीहरु पुरुषको मात्रै हिस्सामा परेका सामाजिक—आर्थिक—पारिवारिक जिम्मेवारी बाँडफाँड गर्न सक्ने बन्छन्। जसको परिणामस्वरुप पुरुषले पनि आफ्नो बोझिल जिन्दगीबाट छुटकारा पाउँछ। यसले समाज सन्तुलित र समझदारीपूर्ण बन्छ। यसरी हेर्दा पुरुषको समेत वकालत नारीवादले गर्छ। नारीवादले पुरुषहरुको अस्तित्वलाई निमिट्यान्नै पार्ने भनेर भन्दैन।
नारीवादी लेखनबाट तपाईंको आफ्नै जीवनमा चाहि के असर/प्रभाव परेको छ?
स्वीकार्नै पर्ने कुराचाहिँ एउटा अधिकारवादी लेखकको रुपमा मेरो लोकप्रियता बढेको छ। मैले मान्छेहरु चिन्दैछु, मान्छेहरुले मलाई चिन्दैछन्। मेरो ‘ग्रोथ’ भइराखेको समय छ। हिजो पत्रिकामा मात्र लेख्थेँ, आज सार्वजनिक बहस र टिभी शोहरुमा बोलाइन्छु। आफूले जे भन्न खोजिरहेको हो, त्यो गम्भीरतापूर्वक सुन्ने मान्छेहरुको संख्या बढ्नु खुसीको कुरा हो पनि। किनकि धेरै मान्छेहरुले सुनुन् र सहमत होउन् भन्ने नै उद्देश्य हो। मेरा स्तम्भहरु पढेको आधारमा कतिपयलाई लाग्दो रहेछ, म समाजशास्त्र वा लैंगिक अध्ययनको प्राध्यापन गर्छु वा कुनै अधिकारसँग सम्बन्धित गैरसरकारी संस्थामा काम गर्छु। पोखरामा त धेरै अघिदेखि नै त्यस्तै खालका बहस वा प्रेजेन्टेसनमा बोलाई नै राख्छन्। तर मैले समाजशास्त्र वा लैंगिक अध्ययन पढिसकेर लेख्न सुरु गरेको होइन। आफूले देखे–भोगेको सामाजिक राजनीतिको आधारमै लेख्न सुरु गरेको हुँ। म त अंग्रेजी साहित्यको विद्यार्थी हुँ। त्यसैले ती विषयहरुको टेक्निकल व्याख्या नै गर्नचाहिँ मलाई गाह्रो पर्छ। यी सबैका कारण मलाई आफ्नो काममा अझ बढी अध्ययन अनुसन्धानको जरुरत महसुस भएको छ। महिला र लैंगिकताको क्षेत्रमा काम गरेका अग्रज प्राध्यापक, अनुसन्धाता वा अधिकारकर्मीहरु पनि मलाई अझ बढी अनुसन्धानमुखी लेखन र लैंगिकताकै विषयको औपचारिक र उच्च डिग्रीका लागि बारम्बार घच्घच्याइराख्छन्। मबाट गरिएको यतिविधि अपेक्षाका कारण एक डेढ वर्ष यता मलाई अब पहिलाजस्तो महिना डेढ महीनामा एउटा लेख लेख्यो र आरामले बस्यो गर्न सम्भव छैन भन्ने लागेको छ। पत्रिकामा स्तम्भ लेखनबाट सुरु गरेको यो ‘इन्टेलेक्चुअल फाइट’लाई एउटा गन्तव्यमा पु¥याउन अझ ठूलो लेभलको र ‘कंक्रिट टेक्स्ट’मा काम गर्न ढिला नै भैसक्यो भन्नेसमेत लागेको छ। यसलाई प्रभावभन्दा बढी जिम्मेवारीको दवाब भन्न मिल्ला। तर, यो सकारात्मक र आफूलाई क्रियाशील राख्न सघाउने खालको दवाब हो।
के यो बहस पर्याप्त मात्रामा भइरहेको छ?
छैन। एक त बहस नै पर्याप्त मात्रामा भएको छैन। जति बहस भएका छन्, ती पनि हुनुपर्ने दिशामा भएका छैनन्। महिलाका विषयलाई लिएर पत्रपत्रिकाका पेजमा वा सार्वजनिक कार्यक्रममा महिलाका खास मुद्दा के हुन् भनेर बहस नै हुँदैन। धेरैजसो लेखक, सहजकर्ता र अन्तरवार्ताकारहरु महिलाका पनि यति—यति दुर्गुण छन् नि भन्नेजस्ता व्यक्तिगत टिप्पणी लेखेर वा प्रश्न सोधेर सुरुमै बहसलाई बहकाउँछन्। यस्ता व्यक्तिगत कटाक्ष वा टिप्पणीको स्पष्टीकरण दिँदैमा कुनै महिला (वा नारीवादी) को जीवनको सम्पूर्ण ऊर्जा सकिन्छ। जबकि, यी वादविवादबाट अगाडि बढेर गर्नुपर्ने काम कति छन् कति। नारीवादी आन्दोलन खासमा के हो, कसरी सुरु भयो, नेपालमा यसको प्रभाव कहिलेबाट र कसरी प¥यो, नेपालको महिला आन्दोलनले आजसम्म के–के उपलब्धि ग¥यो, के–के बाँकी छन् भन्ने जानकारी खासमा यस्ता बहसहरुबाट थाहा हुनुपर्ने हो। तर, यस्ता जानकारी कसै–कसैले पाएकै छैनन्। किनकि, यस्ता बहसहरुमा यो क्षेत्रमा वर्षौं लामो काम गरेका विज्ञ महिलाहरुको सहभागिता हुँदैन। उनीहरु सहभागी भए भने यस्ता बहसहरु बहकिन्थेनन् कि जस्तो लाग्छ तर उनीहरुलाई कसैले सम्झिँदैन।
प्रकाशित मिति: शनिबार, बैशाख ३०, २०७४ १४:४१:२२